Soo-saareyaasha & Alaab-qeybiyeyaasha Cidiyaha cidiyaha | Warshadda Shiinaha Ciddiyaha Clippers
Xayawaanka ciddiyaha maqaarka eeyaha waaweyn
1. Maqaska ciddiyaha xayawaanka eeyaha waaweyn si layaab leh ayey u fududahay in la isticmaalo, goynta ayaa ah mid nadiif ah oo sax ah, waxayna si toos ah u gooyaan iyagoo leh cadaadis yar.
2. Caleemaha ku yaal kilibilkan ayaa 'foorari, xoqin ama miridhku, oo wuxuu noqon doonaa mid fiiqan dhowr jeer ka dib markii la jaro, xitaa haddii eygaagu leeyahay ciddiyo adag. Maqaska ciddiyaha xayawaanka eeyaha waaweyn ayaa leh tayada ugu fiican ee birta birta ah ee birta ah, taas oo siin doonta khibrad goos goos ah oo xoog leh oo waarta.
3. Gacan-siinta aan sibiibix ahayn ayaa raaxo leh in la qabto. Waxay ka hortagtaa maqaska ciddiyaha xayawaanka eeyaha waaweyn ee sibiibixyada ah.
Xaydha Ciddiyaha Clipper Iyo Trimmer
1.Pet Clipper Clipper And Trimmer oo leh farsamo xoqan oo guga lagu shubay oo adkeysi u leh ficilka goynta wax ku oolka ah.
2. Qufulka amniga, samee mashiinka xayawaanka xayawaanka ah oo ku dheji xaalad xiran marka aan la isticmaalin.
3. Qabsashada ergonomiga waxaa loogu talagalay inay si khaldan iskumid ugu wareejiso gacantaada si aad u hesho raaxo dheeri ah iyo sahlanaanta isticmaalka waxay ka caawineysaa ka hortagga ciddiyaha shilalka ee shilka ah. Kaliya si caadi ah u qabso markii aad cadaadis saareyso.
4.Marka ayan isticmaalin, Xaydha Ciddiyaha Clipper iyo Trimmer ayaa lagu xiri karaa caleemaha booska xiran. Si kama 'ah iskama gooyn doontid markaad ka soo saareyso khaanadda.